Eli thala leencwadi liyilwe ngokumangalisayo ligcina i-1,2 yezigidi zeencwadi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Amathala eencwadi, Ngaphandle kokuba ziindawo ezingcwele zolwazi nolwazi, ihlala isebenza njengemizekelo yohlobo olutsha loyilo kuyilo loyilo. Iindonga ezigcina zonke iintlobo zeencwadi ngazo zonke iintlobo zababhali zihlala kufanelekile ukuba zichazwe, njengakule posi.
Inkampani yaseDatshi yokwakha iMVRDV, ethi kuye kwityala lakhe uyilo olunobuchule obukhulu obuqala kwiinqaba zeJenga eVienna ukuya eSkygarden eSeoul, bahamba ngeyabo indlela ngeprojekthi yabo yamva nje: ilayibrari eseTianjin, China eyoqhubeka nokukholisa nayiphi na indwendwe zayo kwiminyaka ezayo.
Ifumaneka kwiSithili seNkcubeko i-Binhai, kwaye iyilelwe ngokusebenzisana ne-TUPDI (iTianjin Urban Planning and Design Institute), izindlu zamathala eencwadi ezinomtsalane zaya kufikelela kwi-1,2 yezigidi zeencwadi. Inxalenye yoluhlu lwezinye izakhiwo ezine ezinxulumene ngokusondeleyo nenkcubeko ngokubanzi.
La Isakhiwo seglasi esineemitha ezingama-34.200 siphawulwa ngokuvula okweqanda ngaphakathi, kukho iholo enkulu engqukuva ethe yabizwa ngokuba "liliso" njengeyona ndawo kugxilwe kuyo. Eli liziko lethala leencwadi elinakho ukudala imeko-bume efanelekileyo yokuhlala, ukufunda kunye nokonwaba.
Los Umgangatho wokuqala nowesibini unikezelwe kwiindawo zokufunda nakwimigangatho emibini ephezulu yezo zinikezelwe eziofisini, kumagumbi okuhlangana, kwiikhompyuter nakwisandi. Umlawuli wayo uWiny Maas uchaza ithala leencwadi njengendawo enkulu evulekileyo yokuhlala kwaye onwabele ukufunda ngee-engile kunye namagophe avuselela ukusetyenziswa okungafaniyo kwezithuba.
Yiyo Iifoto ezibonisa uyilo olubonakalayo lwethala leencwadi engayi kushiya nabani na ongakhathaliyo ngenxa yesikhundla sayo esikhulu kunye noyilo olukhethekileyo oluya kuthi kwakhona lunyanzelise inkampani yaseDatshi, ngakumbi kolu hlobo lwesakhiwo. Sele sikwazisile kwisinye amathala eencwadi kuwo wonke umhlaba ukusuka kwi-monograph ngumfoti okhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uyilo olumangalisayo lwethala leencwadi laseTshayina eligcina iincwadi ezizigidi eziyi-1,2